Maraykanku si buuxda ma u sharciyayn doonaa marijuana marka la gaadho 2022? • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Maraykanku si buuxda ma u sharciyayn doonaa marijuana sanadka 2022?
Maraykanku si buuxda ma u sharciyayn doonaa marijuana sanadka 2022?
albaabka Ties Inc. December 26 2021
maqaal by Ties Inc. December 26 2021
Iyadoo Dimuqraadiyiintu ay hubinayaan Congress-ka sannadkii la soo dhaafay, maalgashadayaasha xashiishadda waxay rajaynayeen in dib-u-habeyn federaali ah ay ku socoto. Nasiib darro, isbeddellada sharci-dejinta ma dhicin. Miyay jiraan isbeddelo waaweyn oo imanaya sanadka cusub?
Qaybta xashiishadda waa hubaal inay isbedeli doonto. Su'aashu waa goorma. 2021-ka, haramaha ayaa sii socday in uu soo ifbaxo, iyada oo sharci-dajiyayaashu ay sameeyeen isku dayo badan oo ay ku riixayaan sharciyad buuxda. Ma laga yaabaa 2022 inuu noqdo sanadka VS Marijuana ugu dambeyntii federaal ahaan waa la sharciyeeyay, mise waxay noqon doontaa niyad jab kale maalgashadayaasha xashiishadda?
Tani waa sababta sharciyeynta federaalku u imanayso 2022
Waxaa jira fiiro gaar ah oo loogu talagalay sharciyeynta marijuana adduunka oo dhan, iyadoo indhuhu inta badan diiradda saaraan Ameerika iyo Kanada. Taasi waa calaamad wanaagsan oo loogu talagalay maalgashadayaasha rajaynaya isbeddel weyn oo ku yimaada muuqaalka xashiishadda.
Tobankiiba sagaal ka mid ah dadka waaweyn ee Maraykanka ah ayaa taageersan sharciyeynta marijuana si loogu isticmaalo madadaalada ama daawada.
Taasi waa sida laga soo xigtay tirooyinka Xarunta Cilmi-baarista ee Pew. Hadda, 36 dawladood ayaa oggol isticmaalka marijuana caafimaad iyo 18 ayaa ansixiyay sharci u oggolaanaya isticmaalka madadaalada.
Su'aal kama aha haddii marijuana ay sharci federaal ah ku noqon doonto Mareykanka - waa su'aal ku saabsan goorta ay taasi dhici doonto iyo sida ay u ekaan doonto.
Hogaamiyaha aqlabiyada Senate-ka Chuck Schumer ayaa hogaaminaya dadaalada dib u habeynta. Wuxuu go'aansaday inuu diiradda saaro sharciyeynta iyo sharci-dejinta halkii uu ka ahaan lahaa qaybo yaryar sida Xeerka Bangiyada SAFE.
Akhri wax dheeraad ah nacasnimo.com (Source, EN)
Deliveroo si loogu soo bandhigo macaamiisha alaabada CBD ee London
Dhallinyaro badan ayaa Maraykanka ugu dhintay daroogooyinka kiniinnada fentanyl-ka ee lagu iibiyo baraha bulshada
Alaabooyinka CBD waxay halis ugu jiraan in laga mamnuuco…
Guddiyada Senate-ka ee Mexico ayaa ansaxiyay sharciga marijuana
Daraasad: Niyad-jabka iyo walbahaarka ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo